AJA သည် Desktop Software v13 နှင့် KONA IP JPEG 2000 Firmware လိုင်စင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Aja Desktop ကိုဆော့ဝဲ v13 နှင့် KONA IP ကို ​​JPEG, 2000 Firmware လိုင်စင်ဦးလွတ်မြောက်
Aja Desktop ကိုဆော့ဝဲ v13 နှင့် KONA IP ကို ​​JPEG, 2000 Firmware လိုင်စင်ဦးလွတ်မြောက်
HLG ပံ့ပိုးမှု JPEG, 2000 အသုံးပြုပုံများ, KONA အိုင်ပီအဘို့, HDR ပိုက်လိုင်းများဘို့ကယ်တင်တတ်၏ 12-Bit / BT.2020 Apple က® ဗိုလ်လုပွဲဖြတ် Pro ကို® X ကိုပံ့ပိုးမှု, ProRes XQ ပြသမှု, Plus အားပို
မြက်ချိုင့်,, CA (ဇွန်လ 29, 2017) - ယနေ့တွင် Aja ဗီဒီယိုစနစ်များ ယင်း၏ KONA, IO နှင့် T-TAP ထုတ်ကုန်များအတွက် Desktop ကိုဆော့ဝဲ v13 ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်, JPEG 2000 အသစ်တစ်ခု KONA IP ကို ​​firmware ကိုလိုင်စင် option ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။ ဤရွေ့ကားသစ်ကိုထုတ်လွှင့်ထုတ်, ထုတ်လုပ်ခြင်း, post ကိုနှင့် ProAV စျေးကွက်များအတွက် HDR နှင့် IP ပိုက်လိုင်းများတိုးဖို့ Aja ရဲ့ကတိကဝတ်ကိုဆက်လက်။
desktop ဆော့ဝဲ v13
desktop ဆော့ဝဲ v13 Adobe မှ HDR-10 နှင့် HLG ပလေးအောက်ကိုဖွင့်, Hybrid ကို Log in ဝင်ရန် Gamma (HLG) အတွက်ထောက်ခံမှုအပါအဝင်အသစ်အ HDR features တွေမိတ်ဆက်® Premiere Pro ကို® Aja KONA 4, IO 4K နှင့် KONA IP ကိုပါ။ အဆိုပါ v13 update ကိုလည်းမိတ်ဆက်:
KONA 12, KONA အိုင်ပီနဲ့ IO 2020K ဘို့ Apple ကနောက်ဆုံးဖြတ် Pro ကို X တွင် 4-Bit / BT.4 ထောက်ခံမှု
4K /UltraHD သို့ HD နှိမ့်ချ-ပြောင်း KONA4များအတွက်
အဘို့အ 48p ထောက်ခံမှု လွန်စွာလိုလားသော KONA အိုင်ပီ, KONA4နှင့် IO 4K နှင့်အတူမီဒီယာ Composer
Aja ထိန်းချုပ်ခန်းဆော့ဖျဝဲအတွက် Linux ကို compatibility
12-bit မှာ ProRes KONA အိုင်ပီ, KONA 4444 နှင့် IO 4K အခမဲ့ Aja ထိန်းချုပ်ခန်းဆော့ဖျဝဲမှတဆင့်4XQ ပြန်ဖွင်ထောက်ခံမှု
KONA နှင့် IO ထုတ်ကုန်များအတွက်အပိုဆောင်း Aja ထိန်းချုပ်ခန်း software features တွေ:
timecode များအတွက်ဖမ်းယူသို့မဟုတ် output ကိုအပေါ် "Burn-In" option ကိုနှင့် စာတန်းထိုး
တပ်မက်လိုချင်သောအထွက် / မော်နီတာလိုင်းများမှ QuickTime ဖိုင်လမ်းကြောင်းအသံပုဒ်
: 30 အများဆုံးကုန်းပတ် Pre-လိပ်အချိန်တိုးမြှင့်
JPEG, 2000 များအတွက် KONA IP ကို ​​firmware ကိုလိုင်စင်
TR-01 နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့, အ optional ကို KONA IP ကို ​​firmware ကိုလိုင်စင်ကွန်ယက်ကိုဖြတ်ပြီး JPEG, 2000 စနစ်များနှင့် devices များနှင့်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါသေချာနှင့်ချုံ့ခြင်းနှင့် decompress နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ် HD အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်ဗီဒီယို / JPEG, 2000 တစ်ဦးထံမှ MPEG2သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီးအတွင်း encoded ။ ဒါဟာထောက်ခံပါတယ်နှစ်ဦးစလုံး JPEG, 2000 တစ်ခု input ကိုနှင့် output ကို KONA IP ကိုအပြေးစနစ်တစ်ခုနှင့်အတူတစ်ပြိုင်နက်စားသုံးမိခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းအားဖွင့်, 1GbE ကျော်စီး။ အသစ်လိုင်စင်လည်း Desktop ကိုဆော့ဝဲ v13 မှတဆင့်လူကြိုက်များဖန်တီးမှုနှင့်အယ်ဒီတာအဖွဲ့ apps တွေအတွက် box ကိုလုပ်ဆောင်ချက်ကိုထဲကပေးပါသည်။ တောင်းဆို JPEG, 2000 Workflows နှင့်အတူ SDK ကို developer များအဘို့, dual-KONA အိုင်ပီ configurations ထောက်ခံနေကြသည်။
desktop ဆော့ဝဲ v13 Aja ရဲ့ website ကနေအခမဲ့ download အဖြစ်ယခုရရှိနိုင်ပါသည်: www.aja.com/support။ : အဆိုပါ KONA IP ကို ​​JPEG, 2000 လိုင်စင်ယခုမှတဆင့် device ကိုတစ်ဦးလျှင် $ 250 အမေရိကန် MSRP များအတွက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် www.aja.com/license.
KST သည် AJA Solutions မှအကူအညီဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည် - ဇူလိုင်လ 16, 2020
AJA သည် 12G-SDI Mini-Converters အသစ်များကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည် - ဇွန်လ 25, 2020
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော post ကိုထုတ်လုပ်မှု SoftAtHome, MStar, CES2017 ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2017-06-29
ယခင်: ဗြိတိန်ရဲ့ BBC နှင့်ရွေးကောက်ပွဲဂရစ်ဖစ်ဘို့ In-Studio ကကင်မရာခြေရာကောက်များအတွက် Mo-sys ကနေကနေဒါ၏ Global သတင်းကို Select လုပ်ပါ StarTracker